နေ့: မေလ 13 2013
Rize မီးရထားနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး: ငါသည်သင်တို့၏အကြိုက်မှအကြောင်းကြားစာအပေါ်ထောက်ပံ့ "Rize အတွက်မီးရထားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏အရေးပါမှု on" ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးıı.rizစာတမ်းဖတ်ပွဲ။ အခြိနျမှနျမှစည်းဝေးပွဲရဲ့အစီအစဉ်မှမီးရထားဘာသာရပ်တစ်ခုအောင်မြင်မှုများ, လေးနက်မျက်စိအောင်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရထံသို့လာကြ၏။ Batumi [ပို ... ]
အိန္ဒိယမီးရထားဝန်ကြီး Kumar Bansal, သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့်အတူတရားစွဲဆိုခံရပြီးနောက်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ Bansal, အရှုပ်တော်ပုံ, ပြည်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားကသူ၏နုတ်ထွက်ပူဇော်ဖို့ကဆိုပါတယ်န်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်း၏ထုတ်ဝေအပြီးတွင်သတင်းထောက်များကိုရန်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့ကြားဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြု. သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဘယ်ကြောင့်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ, Bansal ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများတွေ့ [ပို ... ]
အသစ်က Metro အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျအမျိုးသမီးများနေ့
အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအားဖြင့်လုံးဝ operated ပါလိမ့်မည်သည့်ဆော်ဒီအာရေဗျရှိဆောက်လုပ်ဆဲကြောင့်အသစ်တခုမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအားဖြင့်လုံးဝ operated ပါလိမ့်မည်သည့်ဆော်ဒီအာရေဗျရှိဆောက်လုပ်ဆဲကြောင့်အသစ်တခုမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာအာရပ်သတင်းသတင်း [ပို ... ]
RayHaber 13.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
သံမဏိတံတားYaptırılacaktırYaptırılacaktır၏ပန်းချီအလုပ်အလုပ်ပိုင်းခြားဆက်ဆံဖို့မြန်နှုန်းရထားလမ်းလမ်းကြောင်းကြားရှိဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစနစ် (Caravanserai ရပ်ကွက် Denizli မြို့ပြသစ်တောတည်နေရာ) ၏ installation ကိုလိုင်းရထားလိုင်းများလျှောက်လွှာပင်မနောက်ဆုံးဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံပြုမိပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
အစာရှောင်ခြင်းရထားသည့် 17 မှကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှု (ITSO) ၏ Isparta ကုန်သည်ကြီးများအသင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌သတ်သေ commits ။ ဒါဟာ Isparta စီးပွားရေးကိုအစာရှောင်ရထားကိုယ်စားဗိသုကာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ Merv ကောင်းပြီ၏ Isparta ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏စာနယ်ဇင်းများတွင်တည်ရှိသော Group မှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ပြောပြသည်ဆန့်ကျင်ရန်ညွှန်ပြ [ပို ... ]
အငြိမ်းစားမီးရထားဝန်ထမ်းသင်တို့၏အသနားခံစာကိုအာရုံစိုပင်စင်ဇွန်လ 03 2013 တစ်တောမြိုးစေ့ဖြစ်ရမည်ပေးပါ။ လူသိများသည်အဖြစ် 6461 ကြေညာချက်တရားဝင် Gazette "အကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေများ၏တူရကီရထားလမ်း Liberation" 1 2013 DE မေ 8 2013 ON ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်ခဲ့ [ပို ... ]
Sanliurfa ဗင်နှင့်ရထားလမ်းနောက်ပိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်း 20 ဖို့လိုလား
Sanliurfa ဗင်နှင့်ရထားလမ်း 20 နှစ်ကြာပြီးနောက် Sanliurfa ၏အရေးကြီးဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်းခြောအများပြည်သူမြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာလိုသည်။ အမျိုးမျိုးသောကတိတော်များရှိပါတယ်ပေမယ့်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်မြို့တော်ဝန်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီကို pre-ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်ယူ [ပို ... ]
Marmaray အမြားအဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သမိုင်းကိုမေ့လျော့ပျောက်ကြလိမ့်မည်
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray အမြားအဒါပေမယ့်သမိုင်းကမ္ဘာတွင်နှစ်ဖက်စည်းလုံးညီညွတ်မှသာဆည်းကပ်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းသည်ပြောင်းလဲသွားပြီသမိုင်း၏စာမကျြနှာကိုမေ့လျော့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာဒီသတိထားမဟုတ်, သမိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့နေရာချထားအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကို 'အသံမှာ Genghis ERDIL, ဤအချိန် Marmaray တူးဖော် [ပို ... ]
နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအရှက်ကွဲ! ထိုပြဿနာကိုဆွေးနွေးရန် ... သင်က Go နိုင်သလား? ငါ့ကိုပြောပြရန်ဖြေရှင်းချက် ... သင်တို့အပေါ်မှာသွားရနိုင်သလား? အချိန်အတွက်İncirliလမ်းလမ်းရထားသူတစ်ဦးဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ခဲ့သည်။ ယခင်ကပျက်စီးခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာနှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်ယခုအသက်ရှင်တော်မူသည် [ပို ... ]
ဆောက်လုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ကြားချက်ကိုဖျော်ဖြေဖို့ 400 ဘီလီယံကိုတူရကီကန်ထရိုက်တာရည်ရွယ်သည့်အာဖရိက, ကနေအာဖရိကနိုင်ငံများရှိရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရန်ဖိတ်ခေါ်မှောင်ခိုတိုက်ကြီးကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏4ဒေါ်လာဘီလျံသို့ရောက်ကြ၏။ တူရကီဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအလုပ်ရှင်များ '' အသင်း (Association က) နိုငျငံတျောသမ်မŞükrüKoçoğlu, [ပို ... ]
မီးရထားဘူတာရုံ: စေ့စပ် built ဘူတာရုံအဆောက်အဦးများ, တောင်ခြေလျင် snaking အတွက်မီးရထားဘူတာရုံသို့မဟုတ်သွားလာရန်အဝင်ဝ, ရုပ်ရှင်အခင်းဖြစ်ပွားရာကိုမေ့လျော့မပေးနိုငျအမြဲရှိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ရေလွှမ်းမိုးသို့ကွဲကွာရထားဘူတာရုံ, ရည်းစားများပြန်လည်ဆုံဆည်းဖို့ဝင်ပေါက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုအပုံရိပ်များ၏မျက်နှာကိုအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား [ပို ... ]
အစာရှောင်ခြင်းမီးရထားရထား TIR'la အသစ်ကတံတားEskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) လှည်းယူဆောင်သည့်အတားအဆီးမှပူးတွဲခဲ့ကြသည်, တံတားအတားအဆီးမှပူးတွဲပါခဲ့ပါတယ်။ ကားမောင်းသူဟာလှည်း Baksan တံတား tool ကိုကြွတော်မူသောအခါÇamlıcaရပ်ကွက်တံတား crash မယ်လို့ထားချက်အရအဆိုပါထရပ်ကားလှည်းကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိ YHT [ပို ... ]
Metro အကြွေး Adana မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး
Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က Metro အကြွေးမစ္စတာဝန်ကြီး Veysel Eroglu, အ AK ပါတီကောင်စီအမှားဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေတော်မူ၏။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ယခုအချိန်တွင်အဆိုပါတာဝန်ခံ Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မှာ, AK ပါတီမြို့တော်ဝန် Aytac Durak ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာသည်အဓိကမြို့ [ပို ... ]
YHT ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
YHT ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပ YHT ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ "TCDD နှင့် YHT2၏အဖွင့်ရန်, ယခုနှစ်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ထား။ တူရကီအတွက်ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများနှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထားသည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ထုတ်ပေး [ပို ... ]
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး ADANA Metropolitan စည်ပင်သာယာ Turkmenbashi Boulevard -Airport Inter-ပြည်နယ်မီးရထားဉမင်လိုဏ်ခေါင်း B, C, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း) ၏: D လက်မောင်းကိုဖန်ဆင်းမည်ဖြစ်ပြီးလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 19 အပိုဒ်အရသိရသည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက် [ပို ... ]
ဘူတာပွဲချင်းပြီးဂဟေခြံစည်းရိုးပြား၏လယ်ပြင်နှင့် Manisa အမျိုးအစား ihate အတွက်ကောက်ယူပါလိမ့်မည်
အစက်အပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် panel ကိုခြံစည်းရိုး၏လယ်ပြင်တွင်စခန်းများ Manisa ထွေးပွေ့အမျိုးအစား TCDD2built-in ပါလိမ့်မည်။ ပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်းသင်တန်း (Panel ကိုခြံစည်းရိုး) နှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 19 ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် Manisa အမျိုးအစားထဲမှာဒေသန္တရရုံး gokcebey ဘူတာရုံ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဒေါင်လိုက်မသန်စွမ်းပလက်ဖောင်း built ပါလိမ့်မည် (Malatya တည်းခိုခန်းများနှင့်ဒေသခံအဆောက်အဦးဝင်ပေါက်၏အဆောက်အဦးများ)
ဒေါင်လိုက်ပလက်ဖောင်း STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (Malatya တည်းခိုခန်းများနှင့်ဒေသခံအဆောက်အဦးဝင်ပေါက်၏အဆောက်အဦးများ) မသန်စွမ်း built လိမ့်မည်။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦး MALATYA ဒေသ VERTICAL တည်းခိုခန်းနဲ့ disabled ဒေသခံဆောကျမှုအဝင်အထွက် [ပို ... ]
လှေကားပလက်ဖောင်း STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (ဘူတာရုံပလက်ဖောင်းမှဘူတာရုံ Malatya, Diyarbakir နှင့် Batman ဘူတာရုံ) မသန်စွမ်းလူတို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏လိမ့်မည်။ မသန်စွမ်းသူများကိုကြားဒေသဆိုင်ရာရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Malatya GAR, DIYARBAKIR AND Batman GAR GAR PERONA လှေကား [ပို ... ]
Yolçatıဘူတာရုံအဆောက်အဦပြုပြင်မှုများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်တည်ဆောက်နေပိုင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးYolçatı GAR အဆောက်အအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအပိုဒ်၏အပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီရေတွက် [ပို ... ]
မပြတ်မတောက် power supply နှင့်အတူ Voice ကိုအသံဖမ်း STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ ဒေသန္တရရုံး 1) Voice ကိုအသံဖမ်းဧည့်ခံ2ဖြန့်ဖြူး) ကိုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 19 ပြဋ္ဌာန်းချက်စုဆောင်းမပြတ်မတောက် power supply စုဆောင်းရေး [ပို ... ]